Petrogenesis: waa maxay, astaamaha iyo noocyada samaysanka dhagaxa | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 25/03/2021 11:26 | Geology
Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah laamaha cilmiga dhulka ee diiradda saaraya barashada dhagxaanta, asalka, halabuurka iyo sifooyinka jirka iyo kiimikada iyo sidoo kale qaybinta qolofka dhulka. Qeybtaan cilmiga geology-ga waxaa loo yaqaan petrology. Ereyga petrology wuxuu ka yimid petro wax ku ool ah maxaa dhagaxa loola jeedaa iyo calaamadaha macnaha daraasadda. Waxaa jira kala duwanaansho ku saabsan lithology oo diiradda saaraya isku dhafka dhagaxa aag la siiyay. In petrology ah petrogenesis. Waxay ku saabsan tahay asalka dhagaxyada.
Maqaalkani waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sifooyinka, asalka iyo daraasadaha petrogenesis.
2 Asalka petrology iyo petrogenesis
3 Daraasaadka Petrology
4 Noocyada petrogenesis
Petrology waxaa loo qaybiyaa dhowr meelood oo khaas ah iyadoo kuxiran nooca dhagaxa ee la baranayo. Sidaa darteed, waxaa jira laba laamood oo ka mid ah qaybta daraasaddaha oo ah waa cilmiga dhagxaanta dhagxaanta iyo dhagxaanta dhagxaanta iyo metamorphic. Midka hore waxaa loo yaqaan magaca petrology-ga exogenous iyo kan labaad oo loo yaqaan 'petrology endogenous'. Waxa kale oo jira laamo kale oo ku kala geddisan ujeeddada loo soo jeediyey barashada dhagaxyada. Waxa kale oo jira nooc ka mid ah sawir-qaadista sharraxaadda dhagaxyada iyo petrogenesis si loo ogaado asalkooda.
Petrogenesis waa arrin muhiim ah maadaama ay tahay aasaaska iyo asalka dhagaxyada. Sida oo kale waxaa jira cilmi-baaris kale oo la dabaqay oo diiradda saaraya astaamaha bayoolojiga ee dhagaxyada. Waa in lagu xisaabtamo in si fiican loo ogaado astaamaha bayoolojiga ee dhagaxyada loo isticmaali karo meelo badan oo waliba muhiim ah, sida dhismaha iyo soo saarista ilaha aadanaha.
Sidaa darteed, qaybtan sayniska waa mid aad muhiim u ah tan iyo dhagaxu wuxuu ka kooban yahay taageerada aasaasiga ah ee dhammaan qaabdhismeedka jirka aadanaha. Waxaa muhiim ah in la ogaado qaabdhismeedka, asalka iyo halabuurka dhagxaanta aan dhigeyno oo aan ku dhiseyno kaabayaasha dhaqaalaha. Kahor intaadan fulinin nooc kasta oo dhismeyaal ah, kaabayaal dhaqaale, iwm. Daraasad hore oo ku saabsan noocyada dhagaxyada ka jira salka dhismaha waa in la sameeyaa si looga hortago hoos u dhicitaan suurtagal ah, daadad, musiibooyin, dhul go'id, iwm. Dhagaxyadu sidoo kale waa shey cayriin muhiim u ah inta badan waxqabadka warshadaha aadanaha.
Asalka petrology iyo petrogenesis
Xiisaha dhagaxyada ayaa had iyo jeer ku jiray aadanaha. Waa cunsur joogto ah oo ka jirta deegaanka dabiiciga ah ee farsamada ka dhigtay mid horumarsan tan iyo waqtiyadii hore. Qalabkii ugu horreeyay ee aadanaha waxaa laga sameeyay dhagax oo wuxuu abuuray da 'dhan. Waxaa loo yaqaan 'Stone Age'. Ku darsiga si loo ogaan karo isticmaalka dhagaxyada ayaa si gaar ah loogu hormarshay Shiinaha, Griiga iyo dhaqanka Carabta. Dunida galbeedka waxay iftiimineysaa qoraalada Aristotle halkaasoo ay kaga hadlayaan waxtarkooda.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo bini-aadamku horeba ula soo shaqeeyay dhulka tan iyo wakhtiyadii hore, asalka cilmiga sayniska saynis ahaan wuxuu xiriir dhow la leeyahay asalka geology. Geology waa cilmiga hooyada waxaana la xoojiyay qarnigii siddeed iyo tobnaad markii mabaadiidiisa oo dhan la bilaabay in la dhiso. Petrology oo loogu talagalay iyo ka soo jeeda khilaaf cilmiyeed ka dhex abuurmay asalka dhagxaanta. Khilaafkan, waxaa soo baxay laba xero oo loo yaqaan 'Neptunists iyo Plutonists'.
Neptunists waa kuwa ku doodaya in dhagaxyadu ka soo bilowdaan fadhiisinta qashinka iyo macdanta macdanta laga qariyo badweynta qadiimiga ah ee qarisay meeraha oo dhan. Sababtaas awgeed, waxaa lagu yaqaan magaca Neptunists, iyagoo tixraacaya Ilaahii Roomaanka ee badweynta Neptune. Dhinaca kale waxaan leenahay Plutonists. Waxay u maleynayaan in asalka dhagaxyada uu ka bilaabmayo magma lakabyada ugu qotada dheer ee meeraheenna oo ay sababeen heerkulka sare. Magaca Plutonists wuxuu ka yimid ilaah Roman oo ah hoosta Pluto.
Aqoonta ugu casrisan iyo horumarka tikniyoolajiyaddu waxay noo ogolaaneysaa inaan fahamno in labada boosba ay sharrax ka bixin karaan xaqiiqda. Waana in dhagxaanta jilicsan ay ka soo baxaan geeddi-socodyada la xiriira fikradaha ay leeyihiin dadka reer Neptunist, halka volcanic, dhagaxyada jilicsan ee jilicsan iyo dhagaxyada metamorphic ay leeyihiin asal ahaan geeddi-socodyada ku habboon doodaha plutonists.
Markaan ogaano waxa asalka iyo jagooyinka kaladuwan ee petrology ay yihiin, waxaan arki doonaa ujeedooyinka daraasadda. Waxay daboolaysaa asalka dhagxaanta iyo wax kasta oo la xiriira dhismahooda. Waxay ka mid yihiin asalka, hababka u soo saara, meesha lithosphere ee ay ka samaysan yihiin iyo da'dooda. Waxay sidoo kale mas'uul ka tahay barashada qaybaha iyo sifooyinka jirka iyo kiimikada ee dhagaxyada. Aagga ugu dambeeya ee ugu muhiimsan ee daraasaddu waa qaybinta iyo petrogenesis-ka dhagaxyada ku jira qolofta dhulka.
Baadhitaanka dhexdiisa, petrogenesis-ka dhagaxyada ka baxsan dhulka ayaa sidoo kale la darsaa. Iyagu dhammaantood waa dhagaxyada ka soo baxa bannaanka sare. Xaqiiqdii, dhagaxyada ka yimaada meteorites iyo dayaxa ayaa hadda la baranayaa.
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waxaa jira dhowr laamood oo sayniskaan ah waxaana loo kala saaray 3 geeddi socod oo loo yaqaan 'petrogenesis' kuwaas oo keena dhagxaan: dhagxaanta, dhagxaanta iyo metamorphic rocks. Sidaa darteed, waxay kuxirantahay aagga asal ahaan nooc kasta oo dhagax ah, waxaa jira laba laamood oo cilmiga sayniska:
Jinsiga ayaa mas'uul ka ah barashada dhammaan dhagaxyadaas oo ka soo jeeda lakabyada ugu hooseeya ee qolofta dhulka. Taasi waa, waxay mas'uul ka tahay barashada dhagxaanta qashinka. Noocyada dhagxaanta waxaa laga sameeyaa isku soo uruursiga laamiyada ka dib keydkooda iyo daabulista wakiilada cilmiga dhulka sida roobka iyo dabaysha. Sifeeyahaas ayaa la dhigaa malaayiin sano. Iskusoo wada duuboo, waxay ku dhacdaa heerarka joogga ugu hooseeya sida harooyinka iyo badaha. Waana in lakabyada isdabajooga ay burburayaan, iskudirinayaan qashinka illaa malaayiin sano.
Kala duwan: Waa mida masuulka ka ah barashada noocyada dhagxaanta ee ku samaysma lakabyada ugu hooseeya ee qolofta iyo gogosha dhulka. Halkan waxaan ku leenahay dhagaxyada fulkaanaha iyo plutonic igneous, dhagaxyada metamorphic. Xaaladaha dhagaxyada kacsan, waxay u kici karaan cadaadis gudaha ah iyada oo loo marayo dildilaaca iyo qaboojinta, sameynta dhagaxyo. Hadday u soo baxaan dusha sare ee qaraxyada folkaanaha waa dhagaxyada fulkaanaha. Haddii lagu soo saaray gudaha waa dhagaxyo plutonic ah. Dhagaxyada Metamorphic waxay ka soo baxaan dhagaxyo jilicsan ama jilicsan oo lagu soo rogay culeysyo iyo heerkullo waaweyn. Waxay yihiin dhagaxaan labada nooc ah oo lagu sameeyay mool dheer. Xaaladahaas oo dhami waxay is-beddelaan qaab-dhismeedkooda iyo qaab-dhismeedkooda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto petrogenesis iyo noocyadeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Petrogenesis